Wararka - Sida si sax ah loogu isticmaalo Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW27
Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW275waa miisaan aad u sarreeya oo leh 4 dareemayaal aad u xasaasi ah, oo si sax ah u cabbiri kara culeyskaaga, laakiin waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa si sax ah u isticmaal, haddii kale, culeysku wuxuu noqon doonaa mid eexanaya oo saameynaya cabbirka. Haddaba sidee loo adeegsadaa Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW275 si loo cabbiro culeyska si sax ah?
1. Ugu horrayn, miisaanka miisaanka waa in lagu dhejiyaa sagxad siman, oo aan la dhigin roog ama dhulka jilicsan, oo aan la dhigin meel leh dheelitirnaan sare ama hoose, oo aan la gelin musqusha qoyan, waayo waa alaab elektaroonik ah.
2Wakhtiga miisaanka iyo taagnaanta waa inuu ahaadaa mid sax ah. Kala saar labada cagood adigoon xanibin shaashadda bandhigga. Si tartiib ah ugu istaag hal lug, iyo si joogto ah lugta kale. Ha gariirin ama ha ku boodin miisaanka. Ha xirin kabo, iskuna day inaad ku miisaanto dhar yar intii suurtogal ah si aad ugu dhowaato miisaankaaga.
3 Markaad istaagtid, shaashadu waxay ku siin doontaa akhris, waxayna ku siin doontaa akhrin kale ka dib markaad laba jeer biliglayso, taas oo ah miisaankaaga. Kadib mar kale soo deg oo mar kale miisaan, haddii xogtu la mid tahay tii hore, waa miisaankaaga dhabta ah.
4 Inta badan waxaa jira afar cagood xagga dambe ee miisaanka si loo dejiyo. Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee miisaamidda, aaladda miisaamidda guga. Afartaan cagood waa inay isku mar shaqeeyaan si ay si sax ah u miisaamaan.
5 Bartamaha afarta cagood, waxaa ku yaal qol batteri ah, kaas oo loo isticmaalo in lagu rakibo batteriga shaqeynaya ee miisaanka miisaanka waana in batteriga lagu beddelaa waqtiga. Marka batterigu ka baxo korontada, qiimaha cabiraadda la cabiray sax ma noqon doono. Haddii batteriga la isticmaalay muddo dheer, wuxuu dareere ka daadan doonaa oo dhaawici doonaa wareegga. Markaa fadlan batteriga ku beddel waqtiga.
6U fiirso xadka cabbirka ee miisaanka miisaanka. Xadka miisaankaan waa 180 kiilogaraam. Ha cabirina xadka ka baxsan. Haddii kale, ma awoodi doontid inaad cabirto miisaankaaga, waxaana laga yaabaa inaad lumiso miisaankaaga. Markaa markaad iibsanayso, waa inaad eegtaa qiyaasta cabbirka ee kugu habboon.
Waa lama huraan in maalin kasta la kobciyo caadooyinkaaga, oo miisaan la yeesho wakhti go'an, oo la sameeyo diiwaanno u dhigma.
Kormeerka muddada-dheer, waxaad ku qaadan kartaa miisaanka celcelis ahaan hal toddobaad ama bil badh marka la barbardhigo, maxaa yeelay isbeddelada maalin kasta aad bay u yar yihiin.
Waqtiga dhejinta: Jun-17-2021
Hore: Qiimaha Jaban ee Maal -galinta Hotelada ee Faafa ayaan soo gaarin
Xiga: Sida Loo Doorto Kettle Electric?